पोखरा उपनिर्वाचनको तुजुक | रुपान्तरण
पोखरा उपनिर्वाचनको तुजुक
१० मंसिर २०७६, मंगलवार १७:३३
काठमाडौं । उपनिर्वाचनको नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न साना ठूला सबै पार्टीका नेता पोखरा पुगेका छन् । अन्यत्रको चुनाव भन्दा पोखरा, कास्की–२ को चुनाव रोचक छ । यहाँबाट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका युवानेता रबीन्द्र अधिकारी प्रतिनिधि सभाका लागि निर्वाचित भएका थिए । ताप्लेजुङ्गस्थित पाथिभरा मन्दिर परिसरबाट पर्यटन मन्त्री अधिकारीलार्ई लिएर उडेको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा मन्त्री अधिकारीको निधन भएको थियो । उनको स्थानमा नेकपाले उनकी पत्नी बिद्या भट्टराई (अधिकारी) लाई उम्मेदवार बनाएकोछ ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार देशभर रिक्त रहेका ५० स्थानमा उपनिर्वाचन हुन लागेको हो । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै स्थानीय तहमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने आयोगको तथ्यांकले देखाउँछ । आयोगका अनुसार ४१ वडामा वडा अध्यक्ष पद रिक्त रहेको छ । यस्तै १ नगरप्रमुखका लागि पनि उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने आयोगको तथ्यांकले देखाउँछ । आयोगले दिएको जानकारी अनुसार ३ प्रदेश सभा सांसद र १ प्रतिनिधि सभा सांसदका लागि मंसीर १४ गते उपनिर्वाचन हुन लागेको हो ।
सरकारको परीक्षा !
उपनिर्वाचनमा होमिएका दलले यसलाई परीक्षाको रुपमा लिएका छन् । दिन प्रतिदिन सरकारसँग जनता रुष्ट भइरहेकाले उपनिर्वाचन नेकपा दल र उसले नेतृत्व गरेको सरकारको परीक्षा भएको अन्य दलहरुको भनाइ छ ।
सत्ता बाहिर रहेका दलहरुको चुनाव प्रचारको विषय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको असफलता बनेको छ । उसले बाँडेका रेल र पानीजहाजका सपना, बढदो भ्रष्टाचार, वाइवडी विमान प्रकरणमा भएका घोटालादेखि शान्ति सुरक्षामा बढेको चुनौतिलाई देखाएर मत माग्ने आधार विपक्षी दलहरुले बनाएका छन् ।
निर्मला पन्तले पाउन नसकेको न्यायदेखि बालुवाटार जग्गा प्रकरण, ३३ किलो सुन काण्ड लगायत र ओली नेतृत्वको सरकारले २१ महिनामा गर्न नसकेको काम मतदाताको ‘सेन्टिमेन्ट’ आफूतिर तान्ने गतिलो हतियार बनेको छ ।
नेकपा बाहेक नेपाली काङ्ग्रेस, साझा पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, जनमोर्चा, राप्रपा, राप्रपा संयुक्त, विवेकशील नेपाली दल, समाजवादी पार्टी लगायतका दल उपनिर्वाचनमा होमिएका छन् । उनीहरुको एजेण्डा सरकार विरुद्ध तयार भएको अलोकप्रिय जनमत आफ्नो पक्षमा ‘क्यास’ गर्नु रहेको छ ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय सचिव तथा सांसद पे्रम सुवाल प्रदेश भित्रको नीति निर्माण निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वदेशमै रोजगारी लगायतका विषयमा नेमकिपाको प्राथमिकता परेकाले यसलाई निर्वाचनको प्रचारको अस्त्र बनाएको बताउँछन् ।
नेकपाले आफ्नो पक्षमा नतीजा ल्याउन जनतालाई झुक्याउन खोजेको आरोप लगाउँदै उनी भन्छन्, ‘पार्टीले जिते दुई करोड दिने, मन्त्री बनाउने भन्दै निर्वाचन आचारसंहिता विपरित चुनाव प्रचारप्रसार भइरहेको छ । यहाँ त तत्कालीन माओवादीको तर्फबाट उम्मेदवार छ ।’ सुवाल थप्छन्, ‘प्रचण्डलाई हामीले भारतीय मान्छे भनेका छौं, यिनीहरुले नेपाललाई स्विटजरल्याण्ड हैन सिक्किम बनाएर छाड्छन् ।’
गुठी विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक लगायतका विषयले सरकारलाई सहयोग गरेन । विधेयक बहसमा आएसँगै समग्र पत्रकारिता जगत, वुद्धिजिवी, नागरिक समाज सडकमा आउनुप¥यो । जनताको असन्तुष्टिका बिरुध्द नेकपा नेतृत्वको सरकार मिडियाको घाँटी निमोठ्ने प्रपञ्चमा लागि परेको नकारात्मक सन्देश समाजमा गयो । यो विषयलाई कांग्रेस नेता तथा सांसद गगन थापाले जोडतोडका साथ उठाइरहेका छन् ।
नेकपा मालेका अध्यक्ष सीपी मैनाली काण्डै काण्डमा फसेको सरकारका लागि उपचुनाव दुई वर्षे परीक्षाको रुपमा आएको बताउँछन् । ‘हुन त यो उपनिर्वाचनले सरकार बनाउने, मन्त्री मण्डल विस्तार गर्ने भन्ने कुरा आउँदैन’, उनले भने,‘अघि पछि सरकारको विरोध गर्ने र असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने जनताले नेकपालाई भोट नहाल्नु पर्ने हो । यो नेकपा र सरकारको मात्र होइन, जनताको पनि मत परीक्षाको समय हो ।’
यो उपनिर्वाचन सरकार संचालनमा रहेको दल, प्रतिपक्षी दल तथा नयाँ वैकल्पिक शक्तिको रुपमा उदाउँदो दललाई अवसर बनेको विवेकशील दलकी नेतृ रञ्जु दर्शना बताउँछिन् । राजनीति र वैकल्पिक शक्ति दुबैको अवसर र परीक्षा भएको स्वीकार गर्छिन उनी । प्रचार प्रसारमा जुटीरहँदा पुराना पार्टीसंग मतदाताको अपेक्षा क्रमिक रुपमा घट्दैै गएको दाबी गर्छिन् ।
निर्वाचन प्रचारप्रसार सरकारको कमजोरी देखाएर मात्रै गर्नुहुँदैछ कि ? भन्ने रुपान्तरणको प्रश्नमा उनले भनिन्, ‘सरकारको सफलता असफलताको कुरो हामीले उठाउनु परेको छैन, मतदाता आफैंले सरकारले काम नगरेको विषय प्राथमिकता दिएर उठाएका छन । उनीहरुले प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले पनि काम नगरेको बताइरहँदा हामी उदाउँदो दललाई मत माग्न अलिक सजिलो भएको छ ।’
राष्ट्रियताको अस्त्र !
उपनिर्वाचनमा राष्ट्रियताको विषयले प्रवेश पाएको छ । २०७२ सालमा भारतले लगाएको नाकाबन्दीपछि वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राष्ट्रवादको परीक्षा भएकोछ कालापानी । नेपालको भूमिलाई आफनो भूमिका रुपमा समावेश गरेर भारतले राजनीतिक नक्सा निकालेपछि प्रतिवाद गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको समयमा उपनिर्वाचनमा होमिएका दलहरुले यसैलाई प्रचार सामग्रीको रुपमा लिएका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवाले प्रम ओलीसंगको मिलेमतोमा भारतले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको भाषण गरेपछि देउवाको चौतर्फी बिरोध भएको छ । सत्ता बाहिर रहेका अन्य दलहरु सरकारले कुटनीतिक तवरबाट समस्या समाधान गर्न नखोजेको बताउँछन् । नेमकिपा सचिव तथा सांसद प्रेम सुवाल सरकार देश र जनताप्रति इमान्दार हुन नसकेको बताउँछन् । ‘अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लगेर भारतको दादागिरी समाप्त गर्ने आँट यो सरकारले देखाउँदैन,’ सुवाल भन्छन्, ‘कालापानीमा नेपालको अस्मिता लुटिंदा पनि नबोल्ने सरकारले देशको सार्वभौमिकता कसरी रक्षा गर्छ ?’
नेकपा माले पार्टीले भने मन्त्रीमण्डल फेरवदलले चुनाव लक्षित जनताको लिपुलेखकबाट ध्यान हटाउने प्रयास गरेको निचोड निकालेको छ । पार्टी अध्यक्ष मैनाली प्रधानमन्त्री स्तरबाटमात्र समस्या समाधान हुने भए पनि परराष्ट्र स्तरबाट समेत कूटनीतिक तथा राजनीतिक पहलमा ध्यान नजानु आश्चर्यको विषय भएको बताउँछन् । उनी अबको चुनाव नेकपाको लागि जनमत संग्रह र जनताका लागि अवसर भएको दाबी गर्छन् ।
नेकपा विरुद्ध सिङ्गो कांग्रेस !
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले यो चुनावलाई नेकपा ‘फेलियर’ प्रमाणित गर्ने अवसरको रुपमा लिएको छ । देश दौडाहामा केन्द्रिय स्तरको नेताहरुलाई परिचालन गरेको कांग्रेसले सरकारको कमीकमजोरी २१ बुँदामा निकालेर निर्वाचनमा होमिएको छ ।
प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि हुन लागेको कास्की क्षेत्र नम्बर २ कांग्रेसको प्राथमिकतामा परेको छ । तत्कालीन मन्त्री तथा सांसद स्व. रबीन्द्र अधिकारी पत्नी विद्या भट्टराईलाई पाखा लगाउन पार्टीको सिङ्गो नेतृत्व लागेको छ । नेता खेमराज पौडेललाई टिकट दिएको कांग्रेस सबै आयामहरुबाट आफूलाई अलग बनाउन कम्मर कसेर लागेको छ ।
यहाँ सांसद गगन थापा ,डा. डिला संग्रौला, भीमसेनदास प्रधानदेखि पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा, केन्द्रिय सदस्य डा. शेखर कोइराला, धनराज गुरुङ लगायतका शीर्ष नेताहरु पुगेका छन् । उनीहरु सरकारले जनताको बोल्ने अधिकार खोसेको भन्दै नेकपालाई भोट नहाल्न आग्रह गरिरहेका छन् । यस्तै उपनिर्वाचन हुने अन्य स्थानहरुमा पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल लगायतका नेताहरु उम्मेदवार जिताउन दौडाहमा निस्किएका छन् ।
कांग्रेसले सामाजिक सञ्जालमा प्रचारलाई पनि आक्रामक बनाएको छ । खेमराजलाई ट्वीटर र फेसवुकमा पनि ल्याएको छ । यस्तै केन्द्रीय समितिले सरकारलाई दिनमा एक प्रश्न श्रृङ्खला राखेर युट्युवमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्ने काम गरिरहेको छ । २१ महिनामा सरकारको २१ असफलता निकाल्दै उसले शान्ति सुरक्षा, कुटनीतिक सम्बन्ध, मूल्यवृद्धि, चिकित्सा शिक्षा विधेयक लगायतका विषयहरुलाई उठाएको छ ।
निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि जिल्ला दौडाहामा रहेकी केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद डा. डिला संग्रौला भन्छिन्–‘यो जनमत संग्रह जस्तै हुनेभयो । जनताले नेकपा सरकारको दुई वर्षे नेतृत्व देखेका छन्, सुशासन छैन, भ्रष्टाचार बढ्यो, हत्या हिंसा बढेको बढेकै छ, शान्ति सुरक्षाको स्थिति विग्रियो। जनता नेपाली कांग्रेसको आवश्यकता महसुस गरिरहेका छन् ।’
मुद्दाविहीन प्रतिपक्षी !
नेकपाका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश सभा सांसद रामेश्वर फुँयालले प्रतिपक्ष मुद्दाविहीन भएको आरोप लगाउँदै चुनाव प्रचार प्रसार गर्न गलत बाटो प्रयोग गरेको बताउँछन् । लामो समयसम्म सत्ता कब्जा गरेको कांग्रेसले गर्न नसकेको काम आफ्नो दलको नेतृत्वमा बनेको सरकारले गरेको भन्दै उनी भन्छन्, ‘तीन तहमै हाम्रो दुई तिहाइ हुँदा जनतामा आशा पलाउनु स्वभाविक हो । हामी अरु जस्तो मुद्दाविहीन छैनौं, सपना देखाउन र त्यसलाई पूरा गर्न प्रतिवद्ध छौं ।’ उनी दुई वर्षमा हुन नसकेको काम अबको तीन वर्षमा फत्ते गरेर देखाउने बताउँछन् ।
त्यसो त सत्तारुढ दलले पनि यो निर्वाचनलाई परीक्षाको रुपमा लिएको प्रष्ट छ । उनीहरुका केन्द्रिय स्तरका नेताहरु देश दौडाहामा छन् । केन्द्रिय सदस्य फुँयाल नेकपाको परीक्षा भए पनि जनता फेरी नेकपालाई भोट दिन लालायित भएको बताउँछन् ।
निर्वाचन प्रचारप्रसारमा जनताको घरदैलो पुगिरहँदा सामाजिक कल्याण, भौतिक निर्माण राष्ट्रियता तथा लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न नेकपाले खेलेको भूमिकाले जनतामा उत्साह छाएको उनको दाबी छ । सीमाको बारेमा कुटनीतिक माध्यम नै अन्तिम विकल्प भएको भन्दै फुयाल भन्छन्–‘नेपाललाई समृद्ध र नेपालीलाई नेपाली नेकपा भन्दा अर्को पार्टीले बनाउन सक्दैन ।’